Ganacsi online-ah oo laga billaabay 25 doolar. - BBC News Somali
Ganacsi online-ah oo laga billaabay 25 doolar.
29 Oktoobar 2018
Saami Cabdi Gabbas
Dhalinyarada ku sugan jamhuuriyada iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland ayaa intooda badan ka cawda shaqo la'aan haysata.
Dhalinyarada shaqa la'aanta ay ku dhacdo ayaa waxa ay qaarkood ay miciin bidaan in ay tahriib galaan islamarkaana qaarkood ay ku dhintaan.
Balse waxa jira qaar ka mid ah dhalinyarada oo iyagu shaqooyiin abuurtay islamarkana shaqa abuur u sameeyay dhalinyaro kale.
Saami Cabdi Gabbas, ayaa waxa uu bilaabay suuq si online-ka ah wax looga iibsado .
Suuqani oo lagu magacaabo Saami ayaa waxaa imika ka dukaansada macaamiil gaaraysa 200 oo qof
Suuqyada qaabka online-ka wax lagu iibsado waa kuwa ku cusub gayiga Soomaalida, waxaana jirta caqabado badan oo lagala kulmo.
Saami ayaa sheegay in fikradan ay ku dhalatay kaddib markii lagu wargeliyey in hal isbuuc kaddib uusan ka shaqayn doonin xafiiskii uu kahowlgelijiray uuna markii uu bilaabay shirkadan Online-ka ah uu la kulmay caqabo badan.
Xukun adag oo lagu riday wiil Soomaali ah oo Ingiriiska dhexdiisa daroogada uga ganacsan jiray
'Wiil Soomaali ah oo cidammada Sacuudigu curyaan ka dhigeen
"Howl kasta oo la bilaabayo caqabad ayay leeedahay,caqabdahna waxaa ka mid ah dhaqaalihii lagu bilaabi laha iyo goobtii la fariisan lahaa,maalinki aan bilaabayay waxaa jeebkeyda ku jiray 25 doolar,waxaana ku bilaabay Jaranjaro aan fariisto oo ay dadka dhexmarayeen oo marka ay dadka marayaan dadku dhahayeen dhankaa uga yaraha beydh,maanta isla dabaqii ayay shirkadeydu ku leedahay xafiisyo,ayuu yiri"
Balse Saami ayaa sheegay in maanta ay caqabadahaasi ay ka gudbeen oo dukaamadii markii hore aan aamini jirin ay imika iyaga soo raadsadaan.
Ganacsata wax ku iibiya suuqa Saami ayaa sidoo kale sheegay inay nidaamkan ka faa'iideen.
"Dad meel fog jooga ayaa alaabta dalbada, meel aysan alaabteenna gaarayn ayey Saami gaarsiisay" ayuu yiri mid ka mid ah ganacsatada wax ku iibiya suuqan.
"Mar baa waxaa naga haysatay dhibaato in hal dukaan uu alaabtiis nagu aamino, dukaan waliba waxa uu nagu xujeyn jiray damiin,dukaamadaas maanta macaamiisheena 200 gaareysa waxaa dhici jirtay in aan ka barano macamiisha uun aan idin keenee mushqaayada uun dib nooga soo daro,macaamiishii ku sugnaa magaalooyiinka gobolada ee na oranayay lacagteena side idinkugu aaminaynaa ayaa maanta waxay mareysaa in anaga oo aan ogayn inta ay website-ka soo galaan ay iibsadaan alaabo 1000 doolar ilaa 2000 oo doolar ." ayuu yiri mulkiilaha shirkadan.
Xilligii uu suuqan bilawga ahaa waxa kaliye ee ka howl gelijiray kaligiis, marka uu qof macamiil ah si online-ah uu wax u iibsado kaligiis ayaa u lugayn jiray mararka qaarna bas u raaci jiray si uu macaamisha dalabkooda ugu geeyo.
Ismaaciil Cumar Geele oo mar kale ku guulesytay doorosho ay mucaaaradku qaadaceen